Iwekota nkata na saiti gi n’ime nkeji 5 | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 1, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Na na na WPEngine, Achọpụtara m na ha na-agba ọsọ mkparịta ụka ntanetị dị mma nke na-apụta mgbe ihe dịka 45 sekọnd na saịtị ahụ. Ọtụtụ ndị ahịa anyị nọ na-arịọ maka azịza dị otú ahụ, n'ihi ya, m mere igwu ala ma ihe m chọtara juru m anya!
Mgbapụ bá »a bá» a ihe nzuzu mfe Chat usoro maka gá »‹ website na-ewe banyere 5 nkeji iji wụnye:
Nke mbu, i mejuputara nke ha wijetị na embed akwukwọ na saịtị gị.
Ọzọ, ị jikọọ na mebere 'ọbịa' on Gtalk ma ọ bụ Skype.
Ọ bụ ya ... done ịmeela! Ọfọn!
Uzo a nwere otutu nhazi ndi ozo di iche iche ka anyi mere ihe ole na ole:
Anyị ahaziri bọtịnụ ahụ ma na-emezi ndebiri (chọrọ akaụntụ $ 49 / mo ma ọ bụ karịa).
Anyị gbakwunyere njikọ "Nkata na Anyị" na Facebook Page (atụmatụ Beta).
Anyị na-asọgharị faịlụ transcript na igbe mbata anyị.
Anyị gbakwunyere mwekota Basecamp (enweghị ọnụ) ka mkparịta ụka ọ bụla bido eri na ọrụ ọhụrụ anyị kpọrọ 'Leads'. Ha na-ejikọta ọnụ ọgụgụ CRM (gụnyere SalesForce) na ndị na-enyere aka.
Anyị gbakwunyere ndị ọrụ (akaụntụ azụmahịa na-enye ohere ruo 4) ma hazie foto ha.
Nwere ike ịhazigharị bọtịnụ iji malite nkata ebe ọ bụla na saịtị gị, anyị họọrọ n'akụkụ aka nri:
Pịa bọtịnụ na nkata ga-emepe. Ọ bụrụ na ọnweghị onye dị ịza ajụjụ a, ọ ga - ezitere gị ozi email. Ọ bụrụ na ị nọ n'ịntanetị, ọ na-apụta na Skype ma ọ bụ GTalk n'otu n'otu!
Lelee niile atụmatụ nke Mgbapụ na njirimara ha na ibe ha - o siri ike ma dịkwa ọnụ ala! Nke a bụ oge dị egwu maka ndị mmadụ na-eleta saịtị gị ma ọ na-enye nnukwu ohere ijide ụzọ nke nwere ike ịchọta ihe ha chọrọ ma hapụ saịtị gị kpamkpam.
Oh… na ee, nke ahụ bụ njikọ mmekọ!